လုပ်အားခ တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပြီးနောက် ထိုင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား အဝင်များလာ | ဧရာဝတီ
သန်းထိုက်ဦး| January 8, 2013 | Hits:1,561
3 | | ထိုင်းတောင်ပိုင်း ရနောင်းမြို့ရှိ ရေလုပ်ငန်းတခုမှ မြန်မာအလုပ်သမားများ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်သမားများကို တနေ့ လုပ်အားခ ဘတ်ငွေ ၃၀၀ ပေးရန် ထိုင်းအစိုးရက အတည်ပြုလိုက်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အပါအ၀င် လာအိုနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံသားတို့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်မှု တိုးမြင့်လာရာ ယခုလ ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်မှ ၄ ရက်နေ့ အတွင်း ထိုင်းတွင် ၂၀၀ ခန့် ဖမ်းဆီးခံရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ နိုင်ငံသားများသည် ထိုင်းနိုင်ငံ Buri Ram မြို့နယ်မှ တဆင့် ဘန်ကောက် မြို့သို့ သွားရန် ကြိုးစားရာတွင် ထိုင်း အာဏာပိုင်များ၏ စစ်ဆေး ဖမ်းဆီးမှုများကို ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က ထိုင်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော Manager Online အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုင်းအာဏာပိုင်များ ဖမ်းဆီးထားသည့် လူဦးရေ ၂၀၀ အထဲတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသား အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ် ဘုရားသုံးဆူမြို့ တဖက်ကမ်း စံခလဘူရီမြို့မှ တဆင့် ဘန်ကောက်သို့ သွားသည့် လမ်းကြောင်းတလျှောက် စစ်ဆေးရေး ဂိတ်များတွင် စစ်ဆေးမှုများကို ယခုရက်ပိုင်းတွင် ယခင်ထက် တင်းကျပ် ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
တာခ့်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mr. Suriya Prasatbuntitya က တနေ့ လုပ်အားခ ၃၀၀ (ကျပ် ၈၀၀၀ ခန့်) ပေးမည်ဟု သတ်မှတ်ပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု ပြန်မြင့်တက်လာသည်ဟု ပြောကြောင်း ထိုင်းသတင်းများတွင် ယနေ့ဖော်ပြထားသည်။
“မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်လာလုပ်တဲ့သူတွေ ပိုများလာတယ်။ နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ ကလည်း မြို့တွေမှာ သွားလုပ်ဖို့အထိ ကြိုးစားနေကြတယ်။ တရားဝင် လမ်းကြောင်းကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် တရားမ၀င် နည်းလမ်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သွားနေကြတယ်” ဟု Mr. Suriya က ဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်သမားတဦး၏ အနည်းဆုံး တနေ့ လုပ်အားခအဖြစ် ယခုလ ဇန်န၀၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဘတ်ငွေ ၃၀၀ ပေးရမည်ဟု ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကုန်ပိုင်းတွင် ထိုင်းအစိုးရက ကြေညာခဲ့သည်။
ထိုင်း ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား ဥပဒေတို့တွင် ပြဌာန်းထားချက်အရ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်များသည် ထိုင်းနိုင်ငံသားများသာမက ထိုင်းတွင် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာ၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံတို့မှ အလုပ်သမားများနှင့်လည်း အကျုံးဝင်ကြောင်း သိရသည်။
တရားဝင် လာရောက်လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သမားများကို ဘန်ကောက်မြို့နှင့် တခြားသော မြို့ကြီးများတွင် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် တချို့က ယခုလဆန်ပိုင်းမှ စတင်၍ တနေ့ ၃၀၀ ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ အလုပ်သမားများက ပြောပြသည်။
မဲဆောက်မြို့ အခြေစိုက် ရောင်ခြည်ဦး အလုပ်သမား အဖွဲ့မှ ဦးမိုးဆွေက “တနေ့ လုပ်အားခ ၃၀၀ တရားဝင် သတ်မှတ်လိုက်ပေမယ့် ဒီမဲဆောက်မှာတော့ မရဘူး၊ ကျန်တဲ့ တခြား ဘန်ကောက်တို့လို တချို့ဒေသတွေမှာတော့ ရတယ်လို့ ကြားတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မဲဆောက်မြို့နယ် အတွင်း လုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များက ဘတ် ၃၀၀ မပေးသော်လည်း ယခင် တနေ့ ၁၀၀ ပေးနေသော အလုပ်သမားများကို ၁၇၀ အထိ တိုးပေးလာကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“လက်မှတ်တွေရှိတဲ့ အလုပ်သမားတွေ အများစုက သူတို့ မဲဆောက်မှာ မနေတော့ဘူး။ အထူးသဖြင့် (ယာယီ) ပတ်စ်ပို့တွေရှိတဲ့ အလုပ်သမားတွေက ဒီမှာနေပြီးတော့ ၁၇၀၊ ၁၈၀ နဲ့ဆို သူတို့လည်း ဘယ်လိုမှ မလုပ်နိုင်တော့ ဘန်ကောက် တက်ကြတယ်၊ အခုလည်း တက်နေကြတယ်။ အဲဒီတော့ မဲဆောက်မှာ တရားမ၀င် အလုပ်သမား ပိုများလာမယ်။ အစိုးရက ဘယ်လောက်ပဲ ခြိမ်းခြောက် ခြိမ်းခြောက် အလုပ်ရှင်တွေနဲ့ နယ်မြေခံ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ တရားမ၀င် အလုပ်သမား ငှားရမ်မှုတွေ ပိုပြီးတော့ များလာမယ်။ တရားမ၀င် ခိုးပြီးတော့ ဘန်ကောက်ကို တက်တဲ့လူတွေကလည်း များလာမယ်။ များလာတဲ့အပေါ်မှာ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ပိုပြီးများလာမယ့် အနေအထားရှိတယ်” ဟု ဦးမိုးဆွေက ဆက်ပြောသည်။
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 9, 2013 - 3:22 am	အလုပ်သမားတွေ အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ သူတို့ လုပ်ရတာ ပင်ပန်းကြပါတယ်။ ရထိုက် ရသင့်တာ တန်ရာတန်ကြေး ရသင့်ပါတယ်။
Reply	Salai Lian January 9, 2013 - 11:53 am	Waitresses at many restaurants in Malaysia are young women from Burma. Mahachai in Bangkok suburb has more Burmese population than the Thais. Thein Sein has to tackle unemployment problem in our country. If many of our youngsters are leaving for better life in neighboring countries, Thein Sein needs to know that he is not doing his job well. Burma has more natural resources than Thai and Malay combined. Then, why are people keep heading for abroad?